अनुहारको कालो दाग कसरी सफा गर्ने | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 09/01/2022 13:00 | प्रसाधन सामग्री, व्यक्तिगत हेरचाह
ब्ल्याकहेडहरू अप्रिय हुन्छन् र तिनीहरूको उपस्थिति विभिन्न कारकहरूको कारणले गर्दा हुन्छ जुन छिद्रहरूमा बन्द हुन्छ। किशोरावस्था त्यो समय हो जहाँ मुँहासे र यी कालो हेडहरू बारम्बार देखा पर्छन् चरम उपाय र हेरचाह लिनु पर्छ सरसफाई जस्तै।
यसको उपस्थितिलाई असर गर्न सक्ने अन्य कारकहरू हुन् तनाव, प्रदूषण, खाना वा छाला आफैं तैलीय हुन जान्छ। यस सफाईको पहिलो उद्देश्य प्रयास गर्नु हो ती छिद्रहरू खोल्नुहोस् ताकि ती सबै अशुद्धता वा पदार्थ जसले यसको खोल बन्द गर्छ, हटाउन सकिन्छ।
1 ब्ल्याकहेड्स हटाउन छाला सफा गर्ने तरिका
2 यसको उपस्थितिबाट बच्न दैनिक सफाई
3 पुरुषको अनुहारको कालो दाग कसरी सफा गर्ने ?
ब्ल्याकहेड्स हटाउन छाला सफा गर्ने तरिका
त्यहाँ धेरै उत्पादनहरू वा सक्रिय सामग्रीहरू छन् जुन हामीले सफाई सूत्रहरूको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। साथ क्रीम कालो चारकोल सामग्री तिनीहरूले अशुद्धता धेरै राम्रो अवशोषित। तिनीहरू सामान्यतया उधार छन् मास्कको रूपमा र कालो रंगमा, जहाँ यसलाई अनुहारमा फैलाएर सुकाउन आवश्यक हुनेछ। तिनीहरूलाई हटाउने बेला तपाईंले सबै कालो थोप्लाहरू तान्नु हुनेछ।
सलिसिलिक एसिड यसले गहिराइमा पनि सफा गर्छ। ती क्रिमहरू हुन् जसमा यो कम्पोनेन्ट हुन्छ र अनुहारमा लगाउनु पर्छ, केही सेकेन्डको लागि बिस्तारै मालिस गर्नुहोस् र त्यसपछि कुल्ला गर्नुहोस्। गहिराइमा छिद्रहरू सफा र अनक्लोग गर्दछ।
स्क्रब यो पनि आवश्यक छ। हप्तामा एक पटक, सफा अनुहारमा लागू गर्नुहोस् र बिस्तारै मसाज गर्नुहोस्, यसको कणहरू छोड्नुहोस् त्यो सबै फोहोर तान्नुहोस् त्यो छिद्रहरू बन्द हुन्छ।
यसको उपस्थितिबाट बच्न दैनिक सफाई
हरेक दिन आवश्यक छ दिन सुरु गर्न राम्रो सफाई। अनुहार र न्यानो पानीको लागि एक विशेष साबुन संग हामी तेल क्षेत्रहरु सफा र असर गर्छौं। यसरी पहिले नै हामी अक्सिजन दिने अशुद्धता हटाउने गर्छौं। त्यसपछि हामी संयोजन छाला लागि एक विशेष क्रीम लागू हुनेछ।
सुत्न जानु अघि यो पनि अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ त्यस्तै अनुहार सफा गर्नुहोस् दिनको समयमा अनुहारमा थपिएका सबै फोहोरहरू सफा गर्न हामीले बिहान गरेका छौं। एउटा सिफारिस गर्न प्रयास गर्नु हो हात सधैं सफा, ठीक छ, हाम्रो अनुहारलाई निरन्तर छोएर हामीले यो महसुस नगरी फोहोर थप्न सक्छौं। पछि हामी संयोजन छालाको लागि क्रीम लागू गर्नेछौं र रातमा।
त्यहाँ अन्य प्रकारको दैनिक सफाई गर्न बजारमा पहिले नै क्रिमहरू छन्। यसमा फ्याँकिएको हुन्छ सफाई को लागी एक विशेष दूध, जहाँ अनुहारमा मालिस गरि हटाइनेछ। त्यसपछि त्यहाँ हुनेछ एक विशेष टोनिक लागू गर्नुहोस् संयोजन छालाको लागि र यसरी छिद्रहरू बन्द हुनेछ।
हप्तामा एक वा दुई पटक यो प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ छालाको लागि स्क्रब, यदि यो चिकनी हुन सक्छ। यसले मृत कोशिकाहरू र सबै सेबम निर्माणलाई हटाउन मद्दत गर्नेछ जुन दैनिक आधारमा हटाइएन। यदि यसलाई हटाइयो भने यसले छिद्रहरूलाई अझ राम्रोसँग अनक्लोग गर्न मद्दत गर्नेछ ब्ल्याकहेड्सको उत्पत्ति हटाउनेछ र अन्य त्रुटिहरू।
लागू गर्न सकिने अर्को उपचार हो अनुहार मास्क को प्रयोगत्यहाँ एक शुद्ध, decongestant, oxygenating, moisturizing प्रभाव र बाक्लो छाला को लागी एक उपचार को साथ ती छन्। यी मास्कहरूको आवेदन सबै हेरचाह बढाउनेछ हामीले एक हप्तामा हासिल गरेका छौं।
पुरुषको अनुहारको कालो दाग कसरी सफा गर्ने ?
यो अन्य सफाई प्रविधिमा ब्ल्याकहेडहरू सफा गर्ने समावेश छ घर र घरमा, केहि सरल चरणहरु संग यो लायक हुनेछ।
त्यहाँ छ एक विशेष साबुन संग अनुहार सफा अनुहारको लागि र त्यसपछि हामी टोनर लागू गर्न सक्छौं, यदि सम्भव छ भने यसमा नियासिनमाइड वा भिटामिन बी3हुन्छ। यसले छिद्र खोल्न र गहिराइमा सफा गर्न मद्दत गर्नेछ।
पोडेमोस भाप स्नान तयार गर्नुहोस् एउटा सानो सॉसप्यानमा अनुहारलाई भाप दिनुहोस् र यसलाई बनाउनुहोस् आफ्नो pores खोल्नुहोस्। यो प्रविधि अझै पनि प्रयोग गरिन्छ, तर त्यहाँ ती व्यक्तिहरू छन् जसले यसलाई सिफारिस गर्दैनन् किनभने तिनीहरू सोच्छन् कि यो ब्याक्टेरियाको ठूलो प्रसार हो। तपाईंले अनुहार राख्नु पर्छ केही मिनेटको लागि भापको नजिक, वा तौलिया अनुहार तल भापमा राख्नुहोस्, र तीन देखि चार मिनेटको लागि।
हामी हाम्रो अनुहार राम्रोसँग सुकाउँछौं र हामी जान सक्छौं बिस्तारै थिचेर ब्ल्याकहेड्स निकाल्दैतपाईं यसलाई अझ सटीक बनाउनको लागि सानो कागजको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र यसको निकासी चिप्लिदैन, र निस्सन्देह, क्षति हुनबाट जोगिन आफ्नो नङहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
अवस्थित छ एक कमेडोन एक्स्ट्रक्टर ताकि तिनीहरूले यसलाई कुनै पनि चिन्हहरू नछोडिकन गर्न सक्छन्, तिनीहरूले तपाईंलाई धेरै प्रयास नगरी तिनीहरूलाई हटाउन मद्दत गर्नेछन्। क्षेत्रलाई जबरजस्ती गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् यदि तपाईंले अपेक्षा गर्नुभएको कुरा प्राप्त गर्नुहुन्न भने, तपाईंले गर्न सक्ने एक मात्र कुरा भनेको क्षेत्रलाई खराब बनाउन र पिम्पल वा ब्ल्याकहेड बढ्नु हो।
पछि हामी फेरि साबुन र पानीले अनुहार सफा गर्नेछौं। हामी पनि सक्छौं एक स्क्रब प्रयोग गर्नुहोस् सफाई समाप्त गर्न नरम। अन्तमा हामी प्रयोग गर्नेछौं ती छिद्रहरू बन्द गर्न टोनर र यदि तपाईंलाई क्रीम चाहिन्छ किनभने छाला धेरै सुख्खा छ, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ ब्ल्याकहेड्स को धेरै प्रवण हुनुहुन्छ वा मुखासेयी दैनिक उपचार वा प्रविधिहरूले धेरै राम्रो काम गर्दछ। पूरक सल्लाहको रूपमा हामी अन्य विचारहरू संकेत गर्न सक्छौं ताकि तिनीहरूले अघिल्लो विचारहरूमा हस्तक्षेप नगरूनन्। तैलीय कपाल छ भने यो आवश्यक छ कि तपाइँ यसलाई एक विशेष शैम्पू संग उपचार गर्नुहोस्, सूर्यबाट बच्न तपाईं सबै गर्न सक्नुहुन्छ किनभने मुँहासे अक्सर बिग्रन्छ। बिहान र बेलुका आफ्नो अनुहार धुनुहोस् हामीले निर्दिष्ट गरे अनुसार, आफ्नो हातले आफ्नो अनुहार नछुने प्रयास गर्नुहोस् र तकियाहरू परिवर्तन गर्नुहोस् अक्सर।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » अनुहारको कालो दाग कसरी सफा गर्ने